သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်း နားသတည်း။ | မာသင်
သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်း နားသတည်း။
ကိုယ့် သစ်ပင် ကိုလဲ ကောင်း အောင်ကြိုးစားရမယ်။
ပြီးရင် ဌက်တွေကို လဲ ပေး နားရမယ်။
သစ်တစ်ပင်ကောင်း ဌက်တစ်သောင်းနားသတည်း ဖြစ်လာမှာ။
မေးခွန်း (၄) ခု ဖြေပေးပါ။
၁။ ကိုယ့် သစ်ပင် ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
၂။ ဘယ်လို ကြိုးစားရမလဲ ?
၃။ ဌက်တွေကို ပေးနားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
၄။ ကိုယ့် ဘ၀ အတွေ့အကြုံ အရ တွေ့ကြုံဘူးတဲ့ သစ်ပင်လဲကောင်း၊ဌက်တွေလဲ နားတဲ့ လူသားတစ်ဦးုအကြောင်းကို ပြောပြပါ ?